Umgaqo-nkqubo - Ubuninzi be-NYE kwi-Djs, Vjs, ii-nightclub 2019
Njengabasebenzisi abaninzi bewebhu, i-NYECountdown, i-llc, ("NYECOUNTDOWN, LLC"), iqokelela ulwazi olungabonakali ngabomntu uhlobo lweiphequluli zewebhu kunye neeseva ngokuqhelekileyo ezenza ukuba zifumaneke, njengoluhlobo lwesiphequluli, ukukhethwa kolwimi, indawo yokubhekisa, kunye umhla kunye nexesha lesicelo ngasinye somhambeli. Injongo ye-NYECOUNTDOWN, LLC ukuqokelela ulwazi olungabonakali ngabomntu kukuqonda kangcono indlela iindwendwe ze-NYECOUNTDOWN, LLC zizisebenzisa ngayo iwebhusayithi yayo. Ukususela ngamaxesha, i-NYECOUNTDOWN, LLC ingakhupha ulwazi olungabonakali ngabanye ngokubanzi, umzekelo, ngokupapasha ingxelo malunga nemigqaliselo yokusetyenziswa kwewebhusayithi yayo. I-NYECOUNTDOWN, LLC iphinda iqokelele ulwazi olunokuzenzela ngokwabo njenge-Intanethi ye-Intanethi (i-IP) iidilesi ezingena kubasebenzisi kunye nabasebenzisi abashiya izimvo kwi-Blogs ye-WordPress.com. I-NYECOUNTDOWN, LLC ibonisa kuphela ukungena kumsebenzisi kunye neengxelo ze-IP idilesi phantsi kweemeko ezifanayo ezisetyenzisiweyo kwaye ichaza ulwazi oluchongiweyo ngokuchazwe apha ngasentla, ngaphandle kokuba i-adversi yebhanki ye-IP kunye needilesi ze-imeyile zibonakala kwaye zichazwe kubalawuli beblogi apho izimvo zishiywe.
Ezinye iindwendwe kwiiwebhusayithi ze-NYECOUNTDOWN, LLC zikhetha ukusebenzisana ne-NYECOUNTDOWN, LLC ngeendlela ezifuna i-NYECOUNTDOWN, LLC ukuqokelela ulwazi oluchongiweyo. Isixa kunye nolwazi lwe-NYECOUNTDOWN, LLC luqokelela kuxhomekeke kwimeko yokusebenzisana. Abantu okanye amaziko anokukwazi ukubandakanya ukuthengiselana ne-NYECOUNTDOWN, LLC bacelwa ukuba banikele ngolwazi olongezelelweyo, kubandakanyeka njengoko kuyimfuneko ulwazi oluyimfihlo noluntu olufunekayo ukucwangcisa ezo ntengiso. Kwimeko nganye, i-NYECOUNTDOWN, LLC iqokelela ulwazi olunjalo kuphela njengoko kuyimfuneko okanye ifanelekile ukuzalisekisa injongo yomsebenzi weentengiso kunye ne-NYECOUNTDOWN, LLC. I-NYECOUNTDOWN, LLC ayibhengezi ulwazi oluthile-ngaphandle kokuchazwe ngezantsi. Kwaye iindwendwe zihlala zingavumi ukunikezela ngolwazi lokuzifumanisa ngokwabo, kunye ne-caveat enokubathintela ukuba bathathe inxaxheba kwimicimbi ethile ephathelene newebhusayithi. Njengoko i-website yomhlaba wonke yabaSebenzi, ulwazi lomntu siqu luyakubonakala kubantu abangaphandle kwelizwe lakho lokuhlala, kubandakanye nabantu kumazwe asemthethweni kwimimiselo kunye nemimiselo yelizwe langasese libona ukungabikho kwinqanaba lokukhusela ulwazi olunjalo. Ukuba awuqinisekanga ukuba lo Mgaqo-nkqubo weNgcaciso ungqubana nemithetho yendawo efanelekileyo, akufanele uhambise ulwazi lwakho. Ukuba ukhona kwiYurophu yaseYurophu, kufuneka uqaphele ukuba ulwazi lwakho luya kudluliselwa eUnited States, ebonwa yiYurophu Yomanyano ukuba inokwanela ukukhuselwa kwedatha. Nangona kunjalo, ngokuhambelana nemithetho yendawo yasekhaya iphumelela i-European Union Directive 95 / 46 / EC ye-24 Oktobha i-1995 ("I-EU Yomgaqo-nkqubo Wobumfihlo") ekukhuseleni abantu ngabanye malunga nokuqhutyelwa kwedatha yomuntu kunye nokuhamba ngokukhululeka kwedatha, efumaneka kumazwe angaphandle kweUnited States of America abathumela ulwazi oluyimfihlo ngoko ke avuma ukusebenzisa ngokubanzi olo lwazi njengoko lunikwe kule Mgaqo-nkqubo weMfihlo kunye nokudluliselwa kwayo kunye / okanye ukugcinwa e-United States of America.
Ababhalisi bayakhuthazwa, kodwa kungadingeki ukuba bangenise ulwazi malunga nabo, oluya kuboniswa nge-akhawunti yabo. Okwangoku, siza kubonisa kuphela kwinethiwekhi yethu yokuBhalisa, "isiteketiso" sakho kunye nomzi okhoyo kuwo. Ukuba awufuni ukuba ulwazi lwakho lendawo luboniswe, ungangenisi xa ugcwalisa ifom yakho yolwazi lokubhaliselwa.
I-NYECOUNTDOWN, LLC izinikele ekukhuseleni ubumfihlo babantwana, ngakumbi abo bangaphansi kwe13. Njengoko i-NYECOUNTDOWN, LLC ikhuthaza abazali nabagadi ukuba babandakanyeke ngentshiseko kunye nokukhangela kunye nokuthanda kwabo abantwana. I-NYECOUNTDOWN, LLC ayiqokeleli ngenjongo ulwazi oluvela kubantwana. Ngaphezulu, i-NYECOUNTDOWN, LLC ayijolise kwiSayithi yayo kubantwana.
• kufuneka ukwazi olo lwazi ukwenzela ukuluqwalasela egameni le-NYECOUNTDOWN, LLC okanye ukubonelela ngeenkonzo kwiiwebhusayithi ze-NYECOUNTDOWN, LLC kunye
• abavumelene ukuba bangazixeleli kwabanye.
Abanye balabo baqeshwa, iikontraka kunye nemibutho enxulumene nayo ingafumaneka ngaphandle kwelizwe lakho; ngokusebenzisa iiwebhusayithi ze-NYECOUNTDOWN, LLC, uyavuma ukutshintshwa kolwazi olunjalo. I-NYECOUNTDOWN, LLC ayiyi kuqeshisa okanye ithengise ingqalelo yokuzifumanisa ngokwabo kunye nolwazi lokuzikhethela ngabanye. Ngaphandle kwabasebenzi bayo, iikontraka kunye nemibutho ehambelanayo, njengoko kuchaziwe ngasentla, iNYECOUNTDOWN, LLC ichaza ukuchonga nokuzifumanisa ngokwabo ulwazi kuphela ngokuphendula kwisigcawu, umyalelo wenkundla okanye esinye isicelo sikaRhulumente, okanye xa i-NYECOUNTDOWN, LLC ikholelwa ukholo lokuba ukudalulwa kuyimfuneko ukukhusela ipropati okanye amalungelo e-NYECOUNTDOWN, LLC, amaqela esithathu okanye uluntu jikelele. Ukuba ungumsebenzisi obhalisiweyo wewebhusayithi ye-NYECOUNTDOWN, LLC kwaye unikezele idilesi yakho ye-imeyile, i-NYECOUNTDOWN, LLC ingathumela nge-imeyile i-imeyili ukuba ikuxelele ngeempawu ezintsha, unxuse impendulo yakho, okanye ugcine nje ngokuqhubekayo noko kwenzeke kunye ne-NYECOUNTDOWN, LLC kunye nemveliso yethu. Ngokubanzi sisebenzisa iiblogi zethu zeemveliso ezahlukeneyo ukuze sidibanise lolu hlobo lwengcaciso, ngoko silindele ukugcina lolu hlobo lwe-imeyli ubuncinane. Ukuba usithumela isicelo (umzekelo nge-imeyile yenkxaso okanye ngezinye zeendlela zethu zempendulo), sigcina ilungelo lokushicilela ukuze sikwazi ukucacisa okanye ukuphendula kwisicelo sakho okanye ukusinceda ukuxhasa abanye abasebenzisi. I-NYECOUNTDOWN, LLC ithatha onke amanyathelo afanelekileyo ukukhusela ekungeneni okungagunyaziswanga, ukusetyenziswa, ukuguqulwa okanye ukutshatyalaliswa kolwazi lokuzifumanisa kunye nolwazi oluzimeleyo.
I-cookie ngumtya wolwazi ukuba i-intanethi igcina kwikompyutye yomvakatye, kwaye isiphequluli somvakatye sinikela kwiwebhusayithi ngalunye xa umvakashi ebuyela. I-NYECOUNTDOWN, LLC isebenzisa ikhukhi ukunceda i-NYECOUNTDOWN, LLC ukuchonga nokulandelela iindwendwe, ukusetyenziswa kwazo kwewebhusayithi ye-NYECOUNTDOWN, LLC kunye nokukhethwa kwazo kwi-website. I-NYECOUNTDOWN, LLC iindwendwe ezingathandi ukuba ii-cookies ezibekwe kwiikhompyutheni zazo zifanele zibeke iiphequluli zazo ukuba zikhuphe ii-cookies ngaphambi kokusebenzisa iiwebhusayithi ze-NYECOUNTDOWN, LLC, kunye nephulo lokuba ezinye iifayili ze-NYECOUNTDOWN, LLC zingasebenzi kakuhle ngaphandle kokunceda iikhukhi. I-NYECOUNTDOWN, LLC iya kuthi / ayiyi kuyihlonela ayifaki izicelo.
Ngamanye amaxesha, i-NYECOUNTDOWN, LLC ingathumela i-imeyile iifayile zeendaba, izipapasho, iitekisi (i-sms) uphando okanye enye ingcaciso, okanye enye inxibelelana nawe ngeenkqubo ezizenzekelayo. Ukuba ukhetha ukungafumani nayiphi na okanye le nxibelelwano, unokuphuma ngokulandela izikhokelo ezinikezelwe kwii-newsletters kunye nezipapasho ze-electronics, okanye i-imeyili ethi support@nyecountdown.com ebonisa umnqweno wakho wokukhutshwa naluphi na uluhlu okanye ukuba idatha yakho isuswe kwiinkonzo ze-NYECOUNTDOWN, LLC. Umbhalo (ii-sms) ukuphuma, phendula nje ngokuthi "Phuma".
Nangona uninzi lwenguqu lunokuba luncinci, i-NYECOUNTDOWN, LLC ingatshintsha iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile, kunye neNYECOUNTDOWN, LLC. I-NYECOUNTDOWN, LLC ikhuthaza iindwendwe ukuba zihlolisise eli phepha naluphi na utshintsho kuMgaqo-nkqubo Wobumfihlo. Ukusetyenziswa kwakho kweSayithi ngokuqhubekayo emva kokuba kukho utshintsho kule Mgaqo-nkqubo weMfihlo uza kubakho ukwamkela kwakho utshintsho.
Lo mgaqo-nkqubo uya ngasese uya kulawulwa yizinto ezichasayo kunye neemingcele kwiimfanelo njengoko zifunyenwe kwi-NYECOUNTDOWN, LLC yeMigomo yokuSebenza ngokubhekiselele ekusebenziseni kwaye kunye nokuvunyelwa ngumthetho.
Lo mgaqo-nkqubo wobucala uya kulawulwa nguMthetho oLawulayo kunye neNdawo engabonakaliyo njengoko kufumaneka kwi-NYECOUNTDOWN, LLC yeMigqaliselo yokuSebenza ngokubhekiselele ekubeni loo migaqo iyasebenza kwaye njengoko kuvunyelwe ngumthetho.